द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | फरवरी 26, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
काममा हिज्जे गल्तीहरू तुल्याउन सकिदैन किनभने तिनीहरूको तपाईंको पेसागत क्यारियरमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ। तपाईका रोजगारदाता र तपाईका सम्पर्कहरूले तपाईलाई विश्वास गर्दैनन्, जसले तपाईको प्रगतिको सम्भावनालाई कम गर्दछ। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी पढेर हिज्जे गल्तीहरू तपाइँले पढ्नेहरूले बुझ्छन्? यस लेखमा फेला पार्नुहोस्।
पहिलो निर्णय जुन तपाईंलाई पढ्नेहरूको दिमागमा आउँछ त्यो यो हो कि तपाईंसँग सीपको कमी छ। वास्तवमा, यो भन्नुपर्दछ कि केहि गल्तीहरू अक्षम्य छन् र बच्चाहरू द्वारा उनीहरू द्वारा प्रतिबद्ध गरिएको पनि छैन। नतिजाको रूपमा, यी कहिलेकाँही गलत कौशलता र बुद्धिको अभाव प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन्।
यस अर्थमा, बहुवचनको सम्झौताको राम्रो कमान्ड हुनु आवश्यक छ, क्रियापदको सम्झौताको साथसाथै विगतका सहभागीको सहमति पनि। थप रूपमा, त्यहाँ गल्तीहरू छन् जुन सामान्य समझ र यसैले बुद्धिमत्ता अन्तर्गत आउँछन्। यस अर्थमा, यो एक पेशेवर को "म कम्पनी एक्स को लागी काम" लेख्नुको सट्टा "I work…" लेख्नु अकल्पनीय छ।
मानिस जसले तपाईलाई पढ्छन् र तपाईको लेखनमा गल्तीहरू फेला पार्दछ उनीहरू आफैले आफैलाई भन्दछन् कि तपाईं अविश्वसनीय हुनुहुन्छ। यस बाहेक, डिजिटलको आगमनसँग, गल्तीहरू प्राय: कपटपूर्ण प्रयासहरू र घोटालाहरूमा समाहित हुन्छन्।
त्यसोभए, यदि तपाईं गल्तीहरूले भरिएका ईमेलहरू पठाउनुभयो भने, तपाईंको वार्तालापले तपाईंलाई विश्वास गर्दैन। उसले तपाईंलाई तपाईको दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिको रूपमा पनि सोच्न सक्छ कि उसलाई घोटाला गर्न कोशिस गर्दै। जबकि यदि तपाईंले हिज्जे गल्तीहरू गर्नबाट सावधान रहनुभयो भने, तपाईंले उनलाई पूर्ण विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। क्षति बढी हुनेछ यदि यो कम्पनीको एक सम्भावित साझेदार हो।
अर्कोतर्फ, गल्तीहरू भएका वेबसाइटहरूले तिनीहरूको विश्वसनीयता कम गर्दछ किनकि यी गल्तीले उनीहरूको ग्राहकहरूलाई टाढा गर्न सक्छ।
लापरवाह गल्तीहरू गर्न यो समझनीय छ जब तपाईंसँग कन्ज्युसनको नियमको पूर्ण निपुणता हुन्छ। जे होस्, यी त्रुटिहरू प्रुफरीडि duringको समयमा सुधार गर्नुपर्दछ।
यसको मतलब यो हो कि जब तपाईं गल्ती गर्नुहुन्छ पनि, तपाईंले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ जब तपाईं आफ्नो पाठ प्रूफरीड गर्नुहुन्छ। अन्यथा, तपाईं कठोरताको अभाव भएको व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुनेछ।
त्यसोभए यदि तपाइँको इमेल वा तपाईंको कागजातमा त्रुटिहरू छन्, यो लापरवाहीको संकेत हो जसले संकेत गर्दछ कि तपाईंले प्रमाणित गर्न समय लिनुभएन। यहाँ फेरि, तपाईलाई पढ्नेहरूले भन्नेछन् कि कठोरता नभएको व्यक्तिलाई विश्वास गर्न असम्भव छ।
जसले तपाईंलाई पढ्छन् उनीहरूले यो पनि सोच्न सक्दछन् कि तपाईंले उनीहरूको सन्देश र कागजातहरू पठाउनु भन्दा पहिले उनीहरूको प्रुफ्रेड गर्नको लागि हेरचाहको लागि उनीहरूलाई आदर गर्नुहुन्न। यसैले, सिन्ट्याक्स वा हिज्जे त्रुटिहरूको साथमा मिल्दो कागजात लेखन वा प्रसारणलाई अनादरपूर्ण मान्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, जब लेखहरु सहि र सफा छन्, पढ्नेहरु लाई थाहा छ कि तपाईले तिनीहरुलाई सही पाठ प्रसारित गर्न आवश्यक प्रयास गर्नु भएको छ।
काममा हिज्जे गल्तीहरू: तपाईंलाई पढ्नेहरूले तपाईंलाई कसरी बुझ्ने बनाउनुहुन्छ? फेब्रुअरी th, २०२१Tranquillus
अघिल्लोफ्रान्सको प्रादेशिक तैनाती सम्बन्ध: क्षेत्रीय कौशल लगानी प्याकको अनुकूलन
निम्नकार्यमा हिज्जे गल्तीहरू हटाउनका कारणहरू
कसरी एक पेशेवर पाठ को सही प्रूफरीड गर्ने?
बैठकमा तपाईंको सहभागी घोषणाको लागि इमेल टेम्प्लेट
अनुपस्थितिलाई औचित्य गर्न इमेल टेम्पलेट
सरलताका साथ लेखेर दक्षताका लागि लक्ष्य राख्नुहोस्!